शुक्रबार जन्मिनु भएको हो ? यस्ता छन् शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिको स्वभाव – Saptarangi Nepal
शुक्रबार जन्मिनु भएको हो ? यस्ता छन् शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिको स्वभाव
२०७७ चैत्र १०, मंगलवार १३:५९ गते
सप्तरंगी नेपाल , धारर्मिक मान्यता अनुसार मानिसको चालचलन, व्यवहारलगायत अन्य गतिविधि मानिस जन्मेको जन्मबार, महिना र समयले निर्धारण गरेको हुन्छ ।
को मान्छे कुन बार तथा कति बेला जन्मेका हो उक्त साइतले उसको स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउँदै आएका छन् ।शुक्रबार जन्मिनु भएको हो ?? यस्ता छन् शुक्रबार जन्मिने व्यक्तिको स्वभाव
यस्ता व्यक्तिहरु निकै भावुक स्वभावका हुने गर्छन् जसकारण यिनीहरु अरुको दुःखसमेत देख्न सक्दैनन् र आफू पनि छिट्टै दुःखी हुने गर्छन् । यस्ता व्यक्तिमा भएको राम्रा गुणहरु नै उनीहरुका लागि नराम्रो साबित हुन जान्छ ।
समग्र मा भन्नु पर्दा शुक्रबार जन्मेको मान्छेको सोभावतथा प्रवृति निम्नानुसार छन् !!!